Qorshaha Maareynta Degdegga ah (GEMAS) wuxuu doortaa gvSIG - Geofumadas
Nofeembar, 2011 Cartografia, GvSIG, Maamulka Land
Waxaa la ogeysiisay hirgelinta codsiyada gvSIG si loo hirgeliyo hanaanka loo maro maareynta xaaladaha degdegga ah, sidaas darteed waxaan ku faafineynaa in ay ka fekereyso inay faa'iido u leedahay dad badan.
Gobolka Mendoza ee Argentina, ay mandiqad nugul sababta oo ah xaalad juquraafi iyo xilliyo gaar u saameeyeen ifafaale kala duwan oo dabiici ah, daadad, roobka, dabaysha, roobdhagaxyaale, dhulgariir, marno, dababka kaynta iyo sidoo kale hawshooda waddaa halista anthropic: distilleries, biyo-xireenno , iwm.
Sidaa oo kale, waddamada kale ee adduunka waxay la dhibaatoodaan dhibaatooyin kale sida tornadoes, daadad, sunamis ama dhacdo kale oo waxyeelo u geysta dadka iyo hantidooda.
Dhacdooyinka dabiiciga ah waxay noqdaan musiibo ka dib dhacdada. Kuwani waa la yareeyn karaa qorshooyinka xaadirka ah ee hadda jira.
Dunida adduunka, Horumarinta Aadanaha waa inuu yareeyo khatarta dadka deggan, hantidiisa iyo maalgashadeeda. Wadamada ayaa wada shaqeeynaya noocyo kala duwan oo warbaahin ah, marka mid ka mid ah uu ku dhaco dhibaatooyinka dhacdadan noocan ah.
University of National Cuyo (UNCUYO), wada jir ah ula Xarunta Caalamiga ah ee Earth Sciences (ICES), uu yeesho iyo fulisaa Management Qorshaha Emergency Isticmaalka Falanqaynta Satellite (GEMS), loogu talagalay in ay isticmaalaan farsamooyinka ugu dambeeyay si loo yareeyo khatarta dabiiciga ah iyo nin, ku simaha in tallaabooyinka pre-degdeg ah oo degdeg ah post-degdeg ah.
Waxay isu keenaysaa mashruucan farsamooyinka farsamada iyo farsamada ee mawduucan ka kooban, kuwaas oo qaar ka mid ah lagu xusay:
Hawlgallada Qaranka ee Muuqaalka Qaranka ee Jamhuuriyadda Argentine waxay fulisaa isticmaalka sawirada SIASGE (Talyaaniga-Argentine Nidaamyada Maareynta Xaaladda Degdegga ah), in loo isticmaalo haddii dhacdo dhacdo. (saddex uumis ah oo ku yaalla orbit ah 6)
The shirkadaha technology mendocinas iyo adeegyada raaciyaa ee Institute of Warshadaha, Horumarinta tignoolojiga iyo Adeegyada (IDITS), kaas oo heshiis la saxiixatay ICES ah, sidaa darteed in waaxda warshadaha waa qayb ka mid ah Qorshaha this, iyo sidoo kale si loo yareeyo dayacanka ka hor xaalad degdeg ah, in lagu caawiyo ama gacan ka dhacdo xaalad degdeg ah.
Cilmi-baadhisyo isdaba-joog ah oo la xidhiidha tignoolajiyada sawirrada dayax-gacmeedka iyo xarumaha GPS.
Heshiiska Wasaaradda Horumarinta Aadanaha iyo Agaasimaha Iskaashatooyinka. Mendoza, hay'adaha wada shaqeeya waxay u qaybiyaan biyaha; korontada iyo cuntada. Adeegyadani aad ayay u saameeyeen ka dib markii ay dhacdo dhacdo oo soo saarta dhibbanayaal badan marka loo eego dhacdada lafteeda
Gobolka waa inuu leeyahay hayadahan marka ay jiraan xaalado musiibo.
Dhammaan khayraadkaas waa in la isku rogaa oo loo beddelaa hal nidaam.
GEMAS waxay isticmaashaa saldhig shaybaar ah oo ah nidaamka xogta juqraafiyeed (GIS) ee barnaamijka bilaashka ah ee gvSIG.
Ururka gvSIG wuxuu si guul leh u faafiyey barnaamijkiisa, oo maanta loo adeegsaday adduunka iyo bulshada isticmaala, wuxuu ka qaybqaataa barnaamijyada horumarineed ee ku saabsan horumarinta iyo hagaajinta isticmaalka gvSIG.
UNCUYO iyo ICES ayaa sharraxay isticmaalka barnaamijyadan bilaashka ah oo qayb ka ah shaqadooda waxbarasho, gvSIG ayaa doortay, labadaba suurtagal ahaan iyo sidoo kale arrimaha luqadda iyo dhaqanka.
iskaashi Caalamiga ah ee wadamada kuwa soo gaaray qaar ka mid ah masiibo, waxay noqon kartaa wax ku ool ah haddii MAARAYNTA HALIS MUSIIBADA IYO maamuuska ahaayeen siman.
Waxaan aaminsanahay in gvSIG uu noqon karo barnaamijka isticmaalka guud ee leh heshiis caalami ah ee isticmaalka iyo tiknoolajiyada kale.
Si loo dhammeeyo, UNCUYO iyo ICES waxay diyaar u yihiin Ururada GvSIG ee nidaamka xallinta ilaa hadda qorshaha GEMAS.
Sidoo kale, labada hay'adaha ka codsanaynaa bulshada gvSIG ah, ay opinion on mashruuca, hab maamuuska iyo gobolka in ay u arkaan in ay xiiso u leh in aan la falgala on MUSIIBOOYINKII maaraynta khatarta in ay curiyaan qalab caalamiga caadi ah in loo sameeyo falalka iyo ugu dambeyntii intan ka waxtar badan in HALKAN HALKAN KA DHAMMAYNAYO DEEGAAN GOOBTA GOOBTA.
Post Previous«Previous Kuwa ku guuleysta 7 Wicers Natural
Post Next Geobide, isdhexgalka macluumaadka OGCNext »